How to connect MySQL and MS SQL ? — MYSTERY ZILLION
How to connect MySQL and MS SQL ?
April 2013 edited April 2013 in Database
MS SQL 2000 သုံးထားပြီး ပစ္စည်းစာရင်းတွေကို သိမ်းထားတဲ့ Database တစ်ခုရှိတယ်ဗျာ .. ။
အဲတာကို Website ကနေ MySQL နဲ့ ချိတ်ပြီး ယူသုံးချင်တာဗျာ.. ။ တကယ်လို့ MS SQL မှာ တစ်ခုခု အပြောင်းအလဲရှိခဲ့ရင် Website က MySQL မှာလည်း ပြောင်းမယ်ပေါ့ ။
အဲတာကို လျှောက်ရှာကြည့်တော့ ODBC driver နဲ့ Linked Server လုပ်ရတယ်ဆိုတာတွေ သွားတွေ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် နားမလည်ဘူးဗျ ။ သိတဲ့သူရှိရင် ရှင်းပြပေးကြပါလား ။
MS SQL Server ရှိပြီးသားဆိုဘာဖြစ်လို့ အဲဒါကိုပဲ Web ကနေယူသုံးလို့မရလို့လား ဒါမှမဟုတ် MS SQL Server နဲ့ Web Server က တစ်နေရာစီဖြစ်နေလို့လား။ အခုနောက်ပိုင်း MS SQL Server တွေမှာက Heterogeneous Databases Replication ကမရှိတော့ဘူး 2000 မှာကတော့ရသေးတယ် ဒါပေမယ့် ဆယ်နှစ်ကျော်နေပြီး Extended Support တောင်မရှိတော့တဲ့ Version ဖြစ်သွားပြီ။ MS SQL Server 2000 မှာ MySQL ကို Linked Server အနေနဲ့ ODBC or OLEDB နဲ့ Fully Support လုပ်နိုင်ဖို့ သိပ်မသေချာဘူး။ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ SymmetricDS ကလို Server တစ်ခုကြားမှာ Setup လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
MS SQL Server နဲ့ Web Server က တစ်နေရာစီဖြစ်နေလို့။အဲဒါဘယ်လိုယူသုံးရင်ရလောက်လည်း မသိဘူး
တစ်နေရာစီဖြစ်နေလည်း Web Server ကလှမ်းပြီးတော့ Access လုပ်လို့ရတာပဲ Web Server နဲ့ Database Server တစ်ခုထဲမှာရှိရမယ်လို့ ကန့်သတ်ချက်မှမရှိတာ။ တကယ်လို့ Database Server နဲ့ Web Server ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု Access လုပ်လို့မရတဲ့ Different Network မှာရှိနေရင်တော့ စဉ်းစားစရာကိုမလိုတာ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေ။
ကျွန်တော်ကွန်ပျုတာ တစ်လုံးမှာ ဒေတာဗေ့စ် ထည့်ထားတာ
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ယူသုံးချင်တာ။အဲဒါဘာတွေလိုလည်း မသိလို့ ။ အဲဒီကွန်ပျူတာက အင်တာနက်တော့ရတယ်
အင်းလေ အဲဒါဆိုရင် Web Server ကနေ အဲဒီကွန်ပျူတာထဲ Database ကို Connect လုပ်ပြီးသုံးပေါ့ အဲလိုသုံးဖို့ဆိုရင် Database Server က Public IP တစ်ခုရှိရင်ရှိ ဒါမှမဟုတ် Internal Network ထဲမှာရှိနေရင်တော့ External ကနေ Access လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ ကိုယ့်အလုပ်က Network ကိုယ်ပဲသိလိမ့်မယ်။ အပြင်ကနေ Access လုပ်လို့ဘယ်လိုမှမရရင်တော့ Web Server မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေရာမှာ Database Server တစ်ခုထားပြီး အထဲက Database ပြောင်းသ၍အပြင်ကို Replicate လုပ်ယူပေါ့။ အပေါ်ဆုံးမှာ Heterogeneous ဆိုရင် SymmetricDS လိုဟာကို သုံးကြည့်လို့ဖြေပြီးသားပဲဟာ။
အကိုပြောတဲ့ public ip ဆိုတာက ဘာကိုပြောတာလည်း မသိဘူး။ အဲဒီ ဒေတာဘေ့စ် ထည့်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ ip ကိုပြောတာလား။ (ဥပမာ.. 192.168.0.00 )
192.168.0.0 ဆိုရင်တော့ Internet ကနေတိုက်ရိုက် Access ဘယ်ရပါ့မလဲ Private IP ဖြစ်နေတယ်။ Internet ရတယ်ဆိုတာ့ Externetl Network ရှိတယ် ဒါပေမယ့်ဘယ်လို Structure ရှိသလဲက မမြင်ရတော့ အကြံမပေးတတ်ဘူး အလုပ်က Network Administrator ကိုပဲ Port Forward လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ပဲမေးပါ။
Public IP ဆိုတာကတော့ 208.68.39.254 လိုမျိုး internet ရှိရင် မည်သည့်နေရာကနေ မဆို access လုပ်လို့ရအောင်ပါ။ ပုံမှန် public IP ကိုတော့ ISP တွေကနေ တဆင့် ဝယ်ရပါတယ်။
192.168.1.2 လိုမျိုးတွေက local IPတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ Internet ကနေ ခေါ်မရပါဘူး။ ကိုယ့် local ထဲမှာ ပဲ ခေါ်လို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး CalmHill ပြောသလို Port တွေ ဖွင့်ထားပေးဖို့လိုပါသေးတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ အကိုတို့ ဖြေပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဆက်ပြီး ကြိုးစားကြည့် လိုက်အုံး မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...WinChoTun